घरबाट निस्किएको दश मिनेटमै मृ’त्यु ! – Thulo Khabar - Thulo khabar
घरबाट निस्किएको दश मिनेटमै मृ’त्यु ! – Thulo Khabar
गुल्मी । असार मसान्तको च’टा’रो । हिसाब–किताब मिलान गर्ने, असार मसान्तको अन्तिम दिन । बिहीबार विहानै उठेर गुल्मीको हस्तीचौरमा पसलको पैसा उठाउन जाने योजना बनाए ,तम्घास उ’दि’नढु’ङ्गास्थित किराना पसले सुजन पाण्डले ।
श्रीमती सिर्जनालाई छिटो खान पकाउन लगाई खाना खाएर मोटरसाईकल च’ढेर हिडे त्यसतर्फ । उनी कोठाबाट हिडेको दश मिनेट नपुग्दै अर्खलेमा जीप र मोटरसाइकल ठो’क्कि’ए’को खबर आयो।
चार/पाँच वर्ष अघि विवाह भएको उनको ३ वर्षका एक छोरा रहेको उनका मामा वस्तु निवासी भण्डारीले बताए । उ’दि’नढु’ङ्गावासीका अनुसार पाण्डे अत्यन्तै मिलनसार र हं’श’मु’ख युवा थिए ।
सामाजिक कार्यमा समेत उनी अग्रसर हुँदै आएका थिए । जिल्ला प्रहरी प्रमुख एसपी गोपालचन्द्र भट्टराईका अनुसार धुर्कोट तर्फबाट सदरमुकाम तम्घास आउँदै गरेको भे १ च १९४३ नम्बरको ब’ले’रो जिपले तम्घासबाट छल्दीतर्फ जाँदै गरेको लु ५५ प ७०८२ नम्बरको मोटरसाईकललाई ठ ‘क्क’र दिँदा मोटरसाईकल चालक पाण्डेको मृ’त्यु भएको हो ।